Chọọ ma dochie okwu site na ọtụtụ akwụkwọ | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe anyị chọrọ chọta ma dochie okwu na dọkụmentị akọwapụtara nke anyị meghere, ọrụ iji dabere na ụzọ mkpirisi keyboard nke na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ndezi ederede. Ọ na-ezo aka na "CTRL + F" ma ọ bụ "CTRL + B", nke dabere na ngwa nke anyị na-arụ ọrụ a.
Ọ bụrụ na nchọta anyị lekwasịrị anya n'otu akwụkwọ, anyị nwere ike iji usoro ọdịnala ma ọ bụ jiri nhọrọ nhọrọ dị na menu nhọrọ nke ngwa ọrụ dị iche iche. Otú ọ dị, Kedu maka ịchọta na idochi okwu n'ime ọtụtụ ederede n'otu oge? Nke a bụ ihe anyị ga - eme n’isiokwu a, na - ekwu ụzọ ole na ole ga - enyere gị aka rụọ ọrụ a.
1 Gini mere ichota okwu na otutu ederede n'otu oge?
2 Chọọ na Dochie (FAR)
5 Dochie ederede
Gini mere ichota okwu na otutu ederede n'otu oge?
Ka e were ya na nwa oge, na ị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ echekwara na kọmputa gị (dịka ọmụmaatụ, ihe dị ka 100) na n'ime ha itinyela mbinye aka gị ma ugbu a, ịchọrọ ịgbanwe ya na aha dị iche. Inwe mmeghe nke ọ bụla n'ime akwụkwọ ndị a iji mezue mgbanwe a bụ oke ọrụ ebe ọ bụ na Gaghị ama kpọmkwem, nke akwụkwọ nwere mbinye aka gị na nke na-enweghị. Site na ndị ọzọ anyị ga-ekwu n'okpuru, ị ga-enwe ohere ịmara akwụkwọ ndị bụ ndị nwere okwu akọwapụtara na site ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịnwe ohere ịgbanwe ya maka nke ọzọ.
Chọọ na Dochie (FAR)
Ngwaọrụ aha ya bụChọọ na Dochie (FAR)»Nwere ike inyere anyị aka ụdị ọrụ a n'ihi na interface ya dị mfe ma dịkwa mfe iji. Na mbụ, anyị ga-atụ aro na ngwá ọrụ Ọ ga - akwado gị ka ịwụnye Oge Oge Java ma ọ bụrụ na ịnweghị ya na Windows. Ozugbo ị na-agba ya, ị ga-ahụ onyonyo yitere nke anyị ga-edebe n’okpuru.
Naanị ị ga-ahọrọ ndekọ ebe akwụkwọ gị dị, ụdị faịlụ ịchọrọ maka ọchụchọ gị yana aha ịchọrọ. N'elu e nwere taabụ atọ, nke ha ga - enyere gị aka "chọta, dochie ma ọ bụ nyegharịa aha", mgbe ị ga-enwe ndepụta nke akwụkwọ niile ahụ na okwu ịchọrọ na ebe a.
Ọ bụrụ n’ịchọghi ịwụnye Oge Oge Java mgbe ahụ ikekwe ị ga - eji «Anụmanụ»Ọfọn, ngwá ọrụ a nwekwara interface dị mfe iji rụọ ọrụ.
Ihe ị ga - eme bụ itinye ụdị usoro ahụ na dọkụmentị, okwu ịchọrọ ịchọọ na, onye nke ịchọrọ iji dochie ya na nsonaazụ nke ọchụchọ gị. Na ala nke interface a, a ga-egosi nchekwa ebe ị nwere ike iduzi ọchụchọ gị, ebe akụkụ aka nri ga-apụta otu ihe ahụ.
Ọ bụ ezie na iji mfe na ndị ọzọ minimalist interface, «TurboSR»Na-emezukwa ebumnobi ya nke ịchọta na iji otu okwu edochi anya ya.
N'ebe a, enwere ubi dị oke mkpa iji mee ihe, nke na-ezo aka n'ụdị akwụkwọ, ndekọ aha ebe ịchọrọ ileba anya na ọchụchọ ahụ, okwu ichoro na okwu eji edochi. Nwere ike ịgbalite igbe ahụ ka nchọta ahụ nwee mmetụta nke mkpụrụ okwu edepụtara na mkpụrụedemede ukwu ma ọ bụ nke nta, yana, na-enyocha ya na folda folda.
A dịtụ mgbagwoju ọzọ na ikekwe bara uru n'ihi na a ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ bụ ngwá ọrụ a, nke nwere aha "Dochie Text" na-arụ ọrụ na a kpamkpam dị iche iche n'ụzọ ndị ahụ anyị kwuru n'elu.
Lee a ghaghị ịkọwa ụdị otu dị iche iche maka ọchụchọ na nnọchi anya nke okwu na nkebi ahịrịokwu, ihe nwere ike ịba uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị ji n’aka na ihe anyị chọrọ ịgbanwe na ọtụtụ akwụkwọ n’otu oge.
Anyị ekwuola naanị ụzọ anọ ị nwere ike iji dochie okwu nke bụ akụkụ nke ọtụtụ akwụkwọ, na-enwe ike dochie ya kpamkpam dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ na weebụ nwere ụdị ebumnuche a, n'agbanyeghị na a na-akwụ ha ụgwọ ma nwekwaa ihe mgbagwoju anya n'ụzọ iji ụfọdụ ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi "Chọta ma Dochie" Okwu na ọtụtụ akwụkwọ na Otu Pịa
6 ntanetị ndị ọzọ iji mepụta eserese ọnụ ọgụgụ n'efu